Ny fiara Apple Mysterious dia nalaina sary an-tsary tao Palo Alto | Avy amin'ny mac aho
Ny tsiambaratelo nataon'i Apple amin'ny fitazonana ireo vaniny, fitaovana fakan-tsary miafinaTsy naharitra izy io, ary toa mbola hijery horonantsary marobe kokoa isika, alohan'ny hamaritana izay atao hoe fiara Apple ity. Fiara miafina iray hafa no efa tazana tao Palo Alto, Californie, ary amin'ity indray mitoraka ity dia nalaina tamin'ny horonan-tsary.
Toy ny hafa izay efa hitantsika, tsy azontsika atao ny mahita ny fampifandraisan'ilay fitaovana, na amin'ny sasany fitaovana fanaovana fanadihadiana amin'ny mpamaky angona. Araka ny hita amin'ny horonantsary, Ny mpamily dia manafina haingana ilay fitaovana tsy ho hitan'ny masony, mety ho iPad io, rehefa nampandrenesina ny fisian'ny fakantsary. Ireo mpanamboatra fiara dia manana fitsapana mitovy amin'izany fitsapana ny fiara vaovaonao. Ekipa roa lahy mazàna dia mandeha lavitra manerana ny firenena mba hitsapana ireo antontan-kevitra isan-karazany efa voafaritra, ao anatin'izany ny solika, ny olana amin'ny famokarana tsy ampoizina ary ny fahombiazan'ny ankapobeny. Na ny mpamily na ny mpandeha dia matetika no takiana amin'ny andrana.
Raha ny tombantombana manodidina ny asan'i Apple dia a fiara elektrikaToa tsy misy ifandraisany amin'ireo drafitra ireo akory ireo fiara ireo. Ny fakan-tsarimihetsika sy ny fakantsarin'izy ireo dia manondro fa azo inoana fa ampahany amin'ny tetikasa sarintany izy ireo., toy ny Apple solon'ny Google Street View.
By ny lalana tsy manilika fiara paoma izahay, Na izany aza. Loharanom-baovao marim-pototra maro no nitatitra izany Apple dia nanakarama manam-pahaizana momba ny fiara, ny sasany dia avy Tesla, izay miasa amin'ny a laboratoara fikarohana miafina ambony, hita ao amin'ny foiben'i Apple.
Na izany aza, azo inoana fa mbola ela be vao hitantsika ny vokatr'ity tetikasa manokana ity. Ny mpandinika sasany dia maminavina fa hiandry farafaharatsiny isika dimy taona, raha ny manam-pahaizana hafa kosa dia maminavina fa ho be izany toy ny folo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fiara Mysterious Apple dia voarakitra tamin'ny horonan-tsary tao Palo Alto
Ny fametrahana ny fakantsary dia lavitra ny fiara google satria mifantoka amin'ny vazan-tany efatra amin'ny toerana misy jamba izy ireo, miampy ireo mpamaky tamin'ny laser (heveriko fa izany) no hampiakatra ny orograman'ny tany. Izy io dia mety ho rafitra fisoratana anarana an-tanety hahafahan'ny mpamily mizaka tena tsy mila rafitra fitarihana ivelany, afa-tsy ny GPS.
Ny Sims 4 dia tonga amin'ny dikanteniny ho an'ny Mac